नेपाल टेलिकमले ल्यायो ग्राहकहरुका लागि स्प्रिङ अफ (अफर हेर्नुहोस्) - News Bihani
नेपाल टेलिकमले ल्यायो ग्राहकहरुका लागि स्प्रिङ अफ (अफर हेर्नुहोस्)
२५ माघ,काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ग्राहकहरुका लागि स्प्रिङ अफर उपलब्ध गराउने भएको छ । उक्त अफर आजदेखि आगामी २०७५ बैशाख २५ गते सम्म कायम रहने टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
१४ एमबीपीएस गतिको एफटीटीएच प्याकेज अन्तर्गत ३ महिनाका लागि ७०० जीबी, ६ महिनाका लागि १६०० जीबी र १२ महिनाका लागि ३५०० जीबी डाटा प्रयोग गर्न सकिने छ । यी प्याकेजको मूल्य क्रमशः रु. ४,७४६।–, ,१४।– र १५,५९४।– छ ।
त्यसैगरी कर्पोरेट युजर प्याकेज अन्तर्गत ८ एमबीपीएस गतिको एफटीटीएच प्याकेज ३ महिनाका लागि १६०० जीबी, ६ महिनाका लागि ३६०० जीबी र १२ महिनाका लागि ००० जीबी डाटा प्रयोग गर्न सकिने छ । यी प्याकेजको मूल्य क्रमशः रु. ८,४७५।–, १५,९३३।– र २,४७६।– छ ।
जर्मनीको म्युनिखलाई भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा दिने तयारी